Fampidinana Adobe Photoshop ho an'ny Windows 7 - Fampidinana maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Photoshop Download Amin'ny Windows 7
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2021-11-24, Malagasy Blog
Raha mbola mampiasa Windows 7 ianao ary te hanararaotra ny fahaizan'ny Photoshop, tadiavo ny fomba azo antoka ho an'ny fisintomana Adobe Photoshop ho an'ny Windows 7.
Misintona Photoshop ho an'ny Windows
Misy karazana fitaovana hamoronana endrika kilasy voalohany. Photoshop dia misy andiana endri-javatra sy fitaovana efa napetraka mialoha. Ankoatr'izay, azonao atao ny manaparitaka ny workflow-nao amin'ny plug-in fanampiny maro.
Mahery rindrambaiko ho an'ny sary fanovana na fanodinkodinana. Na tsy takarina ny sarinao na te-hametaka sary iray eo ambonin'ny sary iray hafa ianao dia tsy misy fetra ny mety ho Photoshop. Azo atao aza ny manasa loko manokana mba hanomezana endrika sy fomba fijery miavaka ny sarinao.
ny hahatanteraka amin'ny endrika sary maro. rindrambaiko Photoshop dia manohana ny endrika fisie rehetra mahazatra indrindra, ka tsy mila mampidina plug-in fanampiny ianao. Ankoatr'izay, tsy ilaina ny mifamadika eo amin'ny mpamoaka sary isan-karazany. Azonao atao ny manatanteraka ny fanovana rehetra amin'ny rindrambaiko iray.
ny hahatanteraka amin'ny lahatsary na sarimiaina sosona. Ho fanampin'ny fahaizan'ny fanovana sary efa mandroso, Adobe Photoshop dia afaka miasa miaraka amin'ny horonan-tsary sy sarimiaina. Azonao atao ny manova ny sarin'ny horonan-tsary na sary mihetsika.
Fandaharana maimaim-poana toy ny Photoshop bebe kokoa.
Fampianarana marobe. Retoucher, mpamorona, mpamorona tranonkala ary mpanakanto maro no mampiasa ny Adobe Photoshop ho fitaovana lehibe indrindra ary matetika izy ireo te hizara ny zavatra niainany. Noho izany dia afaka mahita Fampianarana Photoshop maro ianao, fampianarana, seha-pifanakalozan-kevitra mihetsika ary bilaogy fampiofanana.
Integrated rahona fitehirizana. Azonao atao ny mampifandrindra sy miditra amin'ireo rakitra ilaina amin'ny solo-sainanao any amin'ny tanàna sy firenena samihafa. Adobe dia manolotra drafitra maro, manomboka amin'ny 20GB ka hatramin'ny 10TB fitehirizana rahona.
RAM: 2 GB na mihoatra (soso-kevitra 8 GB)
Disk space: 3.1 GB na mihoatra ny toerana misy kapila mafy ho an'ny fametrahana 64-bit
Screen: Seho 1280 x 800 amin'ny scaling UI 100% miaraka amin'ny loko 16-bit
CPU: 2 GHz na processeur haingana kokoa izay manohana 64-bit
Tsy toy ny rindrambaiko Adobe maimaimpoana haavo matihanina hafa, Photoshop dia mitaky fitakiana rafitra mety. Midika izany fa afaka mampiasa an'ity rindrambaiko fanovana sary ity ianao na amin'ny solosaina antonony aza. Ny takiana amin'ny rafitra farafahakeliny dia ampy handefasana Photoshop. Na izany aza, raha mampiasa solosaina malemy ianao dia aza manantena ny hiasa milamina mandritra ny fizotran-tsary.
SINTOMY AMIN'NY PHOTOSHOP HO AN'NY WINDOWS 7
Ho an'ny asa mahomby kokoa amin'ny Photoshop, azonao atao ny mampiasa Photoshop hetsika izay afaka manatsara ny hoditra, manitsy loko, mampamuti ny nify, mampihatra makiazy dizitaly, sns. lavitra.
Sintomy ny fonosana hetsika maimaim-poana
Ity dia andiana hetsika mahasoa indrindra azonao ampiasaina amin'ny fanatsarana ny saripika. Andramo izy rehetra hanamorana ny fizotran'ny retouching sary.
Jereo ny ny fomba fampiasana hetsika Photoshop.
Sintomy ny Adobe Photoshop ho an'ny Windows 7